In post hore waxaan daboolay saliid kumbyuutarradeedu kiiska engine, sida loo hubiyo iyo waxa la raadinayo. In this post aan dabooli hubin doonaa dheecaan gudbinta iyo waxa la raadinayo.
Next in saliidda engine, saliidda gudbinta malaha waa dheecaan soo socda ugu muhiimsan. Waa muhiim u ah idaacadaha si toos ah ay u leeyihiin heerka ugu habboon in si ay u si sax ah u shaqeeyaan oo ay leeyihiin wareejin qaadsiiyey si sax ah iyo in la hubiyo cimri dheer.
Waxa ugu horeeya ee aan samayno waa in ka hor tago oo hubiyo heerka biyaha la isugu gudbiyo ah. Hel ul maquufin iyo jiid aan orodka gaariga. Mararka qaarkood waxaa jira tilmaamo ul maquufin ku saabsan sida loo baaro dareeraha. Sidoo kale ka eeg buuga milkiilayaasha haddii aad leedahay mid ka mid ah laga heli karo, tilmaamaha ku yaalaan, waa in ka yar dheecaannada. Inta badan saarayaasha ayaa sheegaya in gaariga waa in diiran, orodka iyo in dhex-dhexaad ah engine. Dusha dipstick ah oo dib-u-gelin oo mar kale ka soo baxdo iyo hubi in dheecaanka uu yahay in xadka lagu taliyay. Sidoo kale urin dheecaanka, si uusan u leeyihiin urta la gubo. Inta badan idaacadaha waa in ay leeyihiin midabkeeda oo cas oo iyaga iyo ma noqon gebi ahaanba madow (tani waxay ku xiran tahay siday u sarreeyaan masaafada ay saaran tahay gaariga).
Iyadoo qaar ka mid ah baabuurta cusub, gudbinta waa unug gebi ahaanba la shaabadeeyey, taasoo la micno ah in aadan ku dari kartaa ama aan la baaro dareeraha. Kuwan baabuurta iyo gaadiidka oo aad eegi kartaa si isku mid ah, waxaannu ku talinaynaa in ka hor aad u tagto oo la wado gaariga. Haddii gaariga uu yahay mid qabow, halka aad gaadhiga wado, aragto haddii gaariga lagu habsami u wareegaayo. Waxaan jeclahay in aan u samayno laba siyaabood. Mid ka mid ah, ka stop dhamaystiran, si tartiib ah u siinaya ceejinta ka badan sida caadiga ah xaaladaha driving. Labaad, ka stop dhamaystiran iska adag oo si dhakhso ah. Rpms guud ahaan tegi doonaa wax yar ka sareeya ka hor gelinba engine marka tijaabinta sidan. Haddii aad qabto milkiilaha gaariga gaariga waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad u sheegtaa waxa aad samaynaysid ka hor inta gacanta si ay u haysan doonaan wadno iyo qabaa baad ilaa jeexi gaarigooda. Markii la isugu gudbiyo waa qabow waa mid ka mid markii ay kor u shaqeyn doonaa oo aan si quman inayna. Hubi si aad u aragto haddii rpms ah (Kacdoonkii engine halkii daqiiqo) waxaa la socda sare iyo engine waxay si adag uga shaqeeyo ka hor gelinba qaadsiiyey. Sidoo kale markii gaarigooda waa wanaagsan yahay iyo diiran, ogaysiis mar kale qaato ee sida gaadiidka la wareegaayo.
Beddelidda dareeraha isu gudbinta ma aha wax sidii sameeyo si joogto ah u samaysay sida beddelo saliidda engine ah. Si kastaba ha ahaatee, la beddelo waa in sida ay talooyin saarayaasha. Waa in buuga milkiilayaasha Macluumaadkan waxaa ku qoran, waxaana rajeynayaa in iibiyaha uu leeyahay mid ka mid. Waxaan nahay taageerayaasha aan weyn ee nidaamka ah in la beddelo dareere la isugu gudbiyo oo ay ka goosto by tube buuxinta. Meelaha isbedelka saliid Qaar ka mid ah tan loo sameeyo, oo waannu aragnay, halkaas oo isagoo aad samaysay markii gaari uu leeyahay 100,000 miles u ku samaysay ayaa waxyeello ka sii wanaagsan. Ka dib markii ay waxaas samaysay gaariga aan si sax ah u wareejin doona. Had iyo jeer weydii milkiilaha haddii ay ku dhacday qaadsiiyey adeegi iyo sida uu u adeegi iyo meesha. Waxaan ku talinaynaa haddii dheecaanka uu yahay in la bedelo ka hor tago oo hoos u digsiga gudbinta iyo beddelo filter ah.
Ugu dambayn, waxaad had iyo jeer in ay qaataan gaari in aad ayaa ka fiirsaneysa inay wax iibsigu si makaanik shahaado si ay u bixiyaa hal mar ka badan ka hor wax gadashada. Sidoo kale waa inaad hesho gaari warbixinta xaaladda si ay u arkaan haddii baabuurka ayaa waxa u diiwaangashan adeeg laga heli karaa ganacsadaha. Marka baabuur yihiin adeegi ee ganacsaduhu ay sida caadiga ah u soo sheegtaa shirkadaha waaweyn ee warbixinta xaalad baabuurta iyo caawinaysaa in rikoor ah dhammaan adeegyada diiwaan sameeyo gaariga.
Tags: gudbinta hubinta, hubinta dheecaan gudbinta, gaari warbixinta xaaladda